Wareysi: Wiil kasoo goostay ERITREA oo soo bandhigay xogta dhalinyaradii la qaaday - BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Wareysi: Wiil kasoo goostay ERITREA oo soo bandhigay xogta dhalinyaradii la qaaday
Wareysi: Wiil kasoo goostay ERITREA oo soo bandhigay xogta dhalinyaradii la qaaday
Cabdulqaadir oo ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa soo bandhigay xogta dhalinyaradii uu ku jiray oo qaar la dilay, qaar soo baxsadeen, qaarna weli adoonsi ugu jiraan dowladda Eritrea.
Wiilkaan oo u waramay Weriye Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa sheegay in dhalinyaradaas inta ka nool ay ku jiraan xaalad aad u adag, isagoo waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan adoonsiga wiilashooda lagu heysto Eritrea.
Cabdulqaadir ayaa sheegay in dhalinyarada qaar la dilay, kadib markii ay isku dhaceen iyaga iyo ciidamada Eritrea, qiyaastii 400 oo wiil ayuu sheegay in siyaabo kala duwan ay ugu geeriyoodeen Eritrea, inta uu ogyahay.
4-tii bishii October ee sanadkii 2020-kii ayuu Cabdulqaadir sheegay in tababarkii uu u dhamaaday, wixii intaas ka dambeeyana ay ku jireen xaalad aad u adag oo adoonsi ay ugu jiraan dowladda Eritrea.
Dhammaan dadka Soomaaliyeed ayuu Cabdulqaadir ugu baaqay inay dhigaan banaanbaxyo iyo wax kasta oo ay uga dhiidhi karaan dhibaatada heysata wiilasha Soomaaliyeed ee ku jira adoonsiga Eritrea.
Waxuu sheegay in dhibkii loo geystay uu aaqiro iyo aduun Alle kula xisaabtamayo Farmaajo oo dabinkaas u maleegay, sidoo kale Ra’iisul wasaare Rooble ayuu ka codsaday in dhalinyaradaas inta hartay uu noloshooda badbaadiyo.